Soomaali noqday qofkii ugu da’da yaraa oo qaata shahaadada PhD-ga jaamacad ku taala Philippines - BBC News Somali
Soomaali noqday qofkii ugu da’da yaraa oo qaata shahaadada PhD-ga jaamacad ku taala Philippines
19 Abriil 2018
Lahaanshaha sawirka Mursal Suldaan
Image caption Mursal oo guddoomaya shahaadada PhD-Ga
Jaamacad ku taala dalka Philippines ayaa wiil Soomaali ah u aqoonsatay in uu noqday qofkii ugu da'da yaraa oo ebed qaata shahaadada PhD-ga oo ah tan ugu saraysa, waxayna guddoonsiisay shahaado sharaf.
Wiilkan oo lagu magacaabo Mursal Suldaan Cabdullaahi Saalax ayaa ka qalin jabiyay jaamacada Luzon ee magaalada Dagupan ee dalka Philippines, halkaas oo uu ka qaatay shahaadada koowaad illaa tan ugu dambeysa.
Mursal oo u waramay BBC-da ayaa sheegay in uu ku dhashay magaalada Baraagaha Qol ee gobolka Sanaag, waxbarashadiisa hoose dhexe uu ku qaatay magaalada Boosaaso, halkaas oo markii dambe jaamacadda kasoo aaday.
Image caption Mursal Suldaan Cabdullaahi Saalax
"Waxaan wax u bartay dalkeyga hooyo, isaga ayaanan doonayaa in aan aqoontayda ku celiyo, waxaanan ugu baaqayaa dhalinyarada Soomaaliyeed in ay wax bartaan, dalkoodana ku laabtaan, oo ay iska dhaafaan tahriibta" ayuu yiri Mursal oo qadka taleefoonka BBC-da ugu waramay.
Maamulka jaamacada Luzon ayaa Mursal ku ammaanay dadaalkiisa sida ka muuqata shahaado sharafta hoose, waxayna sheegeen in Mursal oo 27 jir ah uu galay diiwaanka taariikhda jaamacadda.
Image caption Shahaado Sharaf
USA oo ka walaacsan hadallada madaxweynaha Philippines
Abu Sayyaf oo lagu eedeeyay Qaraxa bamka ee Philippines
Mursal ayaa sheegay in waalidkiis ay ku dhiirogaliyeen waxbarasha iyo in uu ka gaaro heerka ugu sareeya, wuxuuna sheegay in sababta uu u noqday qofka ugu da'da yar ay tahay in dadka intooda badan marka shahaahada koowaad qaataan ay shaqo tagaan, balse isaga uu joogteeyay waxbarashada.
Image caption Mursal iyo ardaydii kale ee ay isla qalin jabiyeen
"Waad iska fahmaysaa ardaynimo horta wax sahlan ma ahan, waliba marka aad wax ka baranaysid meel aan ahayn waddankaagii, waxa ay u baahantahay dhabar adeyg, caqabado badan ayay leedahay, balse alle ayaa ii suurtogaliyay riyadaydii aan ku taami jiray illaa yaraanteydii" ayuu yiri Mursal.